[Monday, October 2nd, 17] :: Madaxweyne Farmaajo oo saxiixay xeerka isgaarsiinta Soomaaliya
Muqdisho (RH) Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Isniin ah saxiixay xeerka isgaarsiinta Soomaaliya oo dhawaan ay meel mariyeen xubnaha labada golle ee baarlamaanka fedaraalka Soomaaliya.
Munaasabad weyn oo ka dhacday xarrunta madaxtooyada oo lagu saxiixay xeerkan ayaa waxaa ka qeybgalay guddoomiyaha baarlamaanka aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi, ku simaha guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka ahna guddoomiye ku xigeenka koowaad Cabdiweli Shiikh Muudey, ra’iisal wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed, xildhibaanno ka tiraan baarlamaanka, ururada bulshada rayidka iyo warbaahinta.
Madaxweynaha oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in xeerkan dhibaato badan laga soo maray dhib badan wuxuu u mahadceliyey howlwadeenada wasaaradda.
“Wax sahlan ma ahan annaa idiin sheegaya waxaa soo galinay shaqo aad fara badan waxaa kaloo bogaadinayaa howlwadeena wasaarada isgaarsiinta iyo wasiirkooda oo maalintii ugu horreysay boqolkooda maalin uu ahaa in sharcigan laga ansixiyo labada gole, anna maanta ayaan saxiixay waana maalin taarikhi ah”ayuu yiri Farmaajo.
Guddoomiyaha aqalka sare iyo ku simaha guddoomiyaha golaha shacabka iyo wasiirka boostaha iyo isgaarsiinta ayaa goobta ka hadlay iyagoo si isku mid ah u soo dhaweeyay xeerka la meelmariyey.
Goobta munaasabadda waxaa lagu casuumay oo koogay xubno ka socday shirkadaha isgaarsiinta iyo ganacsato.
Si kataba, xeerkan ayaa muddo badan la isku khilaafsanaa gaar ahaan dowladda iyo shirkadaha isgaarsiinta ee gaarka loo lee yahay, hase ahaatee markii dambe waa la isla meel dhigay sida ay wararka sheegayaan.
Xeerkan ayaa maanta si rasmi ah u dhaqangalay waayo marka uu saxiixo madaxweynaha waxaa lagu daraa faafinta rasmiga ah.